ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရှိအကောင်းဆုံးကမ်းခြေများနှင့်ကျွန်းများ (အပိုင်း ၁) | ခရီးသွားသတင်း
အာရှခရီးသွား | | ဖိလစ်ပိုင်, အာရှခရီးသွားခြင်း
သင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါလျှင် ကမ်းခြေကိုစိတ်ကူးယဉ်ပါ ထို့နောက်သင်သည်နေရာချရမည် ဖိလစ်ပိုင် မင်းရေဒါပေါ်မှာ ဒါဟာကျိန်းသေကောင်းတဲ့နွေရာသီအားလပ်ရက် ဦး တည်ရာဖြစ်ပါတယ်။
သင်၏ခရီးကိုကောင်းစွာစီစဉ်ရန်, သင်က၎င်း၏ကျွန်းများနှင့်ကမ်းခြေများအကြောင်းပိုမိုသိသင့်သည်၊ ထို့ကြောင့်ဤအရာများကိုချရေးပါ consejos အကောင်းဆုံးကိုလက်လွတ်ဖို့မသကဲ့သို့။
3 အယ်လ် Nido, Palawan
၎င်းသည်ကျွန်းနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပြီး၎င်းကိုဖွဲ့စည်းထားသည် ထောင်ပေါင်းများစွာသောကျွန်းများ။ ထိုအရာသည်ခရီးသွားရန်ဆုံးဖြတ်သောအခါချစ်ပ်များအားလုံးကိုနေရာချရန်ခက်ခဲစေသည်၊ ထို့ကြောင့်လမ်းကြောင်းကိုကောင်းစွာစဉ်းစားရန်အဆင်ပြေသည်။ ပြည်တွင်းလေကြောင်းလိုင်းများသည်ပုံမှန်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် Cebu Pacific ၏ကုန်ကျစရိတ်နည်းသောလေကြောင်းလိုင်း၏စာမျက်နှာကိုစစ်ဆေးကြည့်ပါ။
၎င်း၏အနည်းငယ်ပို7တရာကျွန်းများ Luzon: ဒေသသုံးခုခွဲခြားထားတယ်ဒီမြို့တော်မနီလာမြို့ မင်ဒါနာအို y Visayas.
Luzon တွင်မင်းသမိုင်းဝင်လမ်းလျှောက်နိုင်သည် မနီလာ အနောက်တိုင်းအမွေအနှစ်ကိုရိပ်မိနိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်မင်းတို့လည်းလမ်းလျှောက်နိုင်တယ် ဆန်ကျန်ကြွင်း အကြောင်းကိုခြောက်နာရီကွာဖြစ်ကြောင်းအလွ။
Batad၊ Banaue, Sagada နှင့် Bontoc တို့တွင်လှေကားထစ်များကိုသင်ကိုယ်တိုင်သွားနိုင်သည်သို့မဟုတ်ခရီးစဉ်တစ်ခုအတွက် sign up လုပ်၍ လေ့လာနိုင်သည်။ ဥပမာ Bontoc နှင့် Sagada အတူတူလေ့လာရေးခရီးတွင်။
ဟုတ်တယ်၊ ရှုပ်ထွေးတဲ့ရာသီဥတုရှိတယ် ဒါကြောင့်ခြောက်သွေ့တဲ့ခြောက်သွေ့ရာသီ၊ စိုထိုင်းဆရာသီနဲ့ပူနွေးတဲ့ရာသီတွေရှိတယ်။ ပထမတစ်ခုမှာမတ်လမှမေလအထိဖြစ်ပြီး၊ ဇွန်လမှနို ၀ င်ဘာလအထိဖြစ်ပြီးစတုတ်မှာဒီဇင်ဘာမှဖေဖော်ဝါရီလအထိဖြစ်သည်။ အမြဲတမ်းပူတယ်
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်၊ ဒါဟာရှိသည်ဖို့လိုအပ်တယ် မေးခိုင်၊ ဆုံဆို့နှင့်အသည်းရောင်အသားဝါရောဂါ A နှင့် B ကာကွယ်ဆေးများ။ ဤအရာအလုံးစုံကိုသိရှိပြီးမှကျွန်ုပ်တို့သည်ဖိလစ်ပိုင်ရှိအကောင်းဆုံးနေရာများသို့သွားနိုင်ပါပြီ။
ဒါဟာဖြစ်ပါသည် မနီလာနှင့်ကီလိုမီတာ ၃၀၀ ကျော်ဝေးသောလှပသောကျွန်း, Visayas ကျွန်းများ၌တည်၏။ ၎င်းသည်inရိယာ ၁၀ စတုရန်းကီလိုမီတာရှိပြီး၎င်း၏ကမ်းခြေများသည်လူကြိုက်အများဆုံးခရီးသွား dest ည့်နေရာတစ်ခုဖြစ်လာသည်။
လေဆိပ်မရှိဘူး ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်သောကြောင့်အနီးအနားရှိ Panay ကျွန်းနှင့် Caticlan ဆိပ်ကမ်းမှပင်လယ်သို့ရောက်ရှိနိုင်သည်။ အနီးအနားရှိကျွန်းတစ်ကျွန်းသို့မဟုတ်မနီလာမှလေယာဉ်ဖြင့်သို့မဟုတ်ကူးတို့ဖြင့်သွားနိုင်သည်။ နှစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာကိုသင်တကယ်တွေ့လိမ့်မယ် အိမ်နီးချင်းလေဆိပ်များ အမြဲကမ်းလှမ်းခဲ့သည်: Caticlan နှင့် Kalibo ။
သူတို့ထဲကတစ်ခုခုကိုရောက်ပြီဆိုလျှင်သင်ကုန်းလမ်းဖြင့်ဆိပ်ကမ်းသို့သွားပြီးထိုမှတစ်ဆင့်ကူးတို့သင်္ဘောဖြင့်သွားရမည်။ လေဆိပ် ကက်တလန် ၎င်းသည်ပိုမိုနီးကပ်စွာရှိပြီးကုန်းကြောင်းလမ်းကြောင်းသည်ငါးမိနစ်သာဖြစ်ပြီး ၉၀ မှာမူဆိပ်ကမ်းကိုခွဲခြားထားသည့်မိနစ်များဖြစ်သည် Kalibo။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည်အလွန်စျေးပေါသည်။
ကူးတို့ထက်ပိုသော Boracay ကျွန်းသို့လှေဖြင့်သွားလာခြင်းသည်လှေဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အေးဆေးတည်ငြိမ်သောပင်လယ်နှင့်ငါးမိနစ်ခန့်ဈေးပေါပြီးအလွန်တိုသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်သင်၏နေရာထိုင်ခင်းကိုသုံးဘီးစီးနိုင်သည်။
Boracay ရပ်ကွက်သို့ခွဲခြားထားသည် o barangay's။ အရက်ဆိုင်နှင့်စားသောက်ဆိုင်များရှိသောခရီးသွားareaရိယာအများဆုံးမှာမြောက်ဘက် Yapak barangay ဖြစ်သည်။ ထိုအခါ Balabag barangay သည်အလယ်တွင်ရှိပြီးတောင်ဘက်တွင် Manoc-Manoc barangay ရှိသည်။
အမှန်တကယ်ပြောရရင်ဒီနာမည်တွေကိုမင်းမကြားချင်ဘူး၊ ခရီးသွားမဂ္ဂဇင်းတွေ၊ ဘလော့ဂ်တွေမှာတောင်မမြင်ရဘူး သူတို့ကိုခေါ်တယ် ဘူတာရုံ 1,2နှင့် 3.
ထို့ကြောင့်ဘူတာ ၁ သည်ပေါင်းစပ်ထားသည် ပါတီ အသက် အအေးအေးဆေးဆေးနဲ့အရာအားလုံးနည်းနည်းရှိတယ်။ သငျသညျကမ်းခြေတလျှောက်အနည်းငယ်လမ်းလျှောက်လျှင်ယခုဟုတ်ကဲ့ရိုက်ထည့်ပါ ပါတီ၏ဗဟိုဖြစ်သည့်ဘူတာ ၂, ဆူညံသံနှင့်ချီတက်။
သငျသညျတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးပင်လယ်ဖြစ်သောဘူတာရုံ3မှာရောက်ရှိလမ်းကြောင်းကိုလိုက်နာပါ။ သတင်းကောင်းမှာစားသောက်ဆိုင်များ၊ စျေးဆိုင်များ၊ စူပါမားကက်များနှင့်လက်ဆောင်ပစ္စည်းများမပါရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
သငျသညျစွန့်စားမှုကြိုက်လျှင် မနီလာမြို့ကနေလှေနဲ့သွားနိုင်ပါတယ် ဒါပေမယ့်ဒီခရီးဟာကိုးနာရီလောက်ကြာမြင့်မယ့်ခရီးဖြစ်ပြီး၊ အရေးကြီးတဲ့အရာကတော့ကမ်းခြေသုံးဆယ်ထဲကတစ်ခုကိုရောက်ရှိပြီးပျော်မွေ့ဖို့ပါပဲ။
သေချာတာပေါ့အခြားသူများထက်ပို။ လူကြိုက်များအချို့ရှိပါတယ်: White ကမ်းခြေ ၎င်းသည်၎င်း၏အဖြူကီလိုမီတာလေးခုနှင့်အတူပထမနေရာတွင်ရှိသည်။ အဲဒီမှာလည်းရှိပါတယ် Diniwid သဲသောင်ပြင် နှင့် Pukka သို့မဟုတ် Bulabog သဲသောင်ပြင်кайтစရန်သို့မဟုတ်ဝင်းလှိုင်းစီးခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
အယ်လ် Nido, Palawan
ထို့အပြင် Visayas တွင် Palawan ပြည်နယ်နှင့်၎င်း၏ပြည်နယ်ဖြစ်သည် မြို့တော် Puerto Princesa ဖြစ်ပါတယ်။ ထက်ဝက်ကိုစွန့်ပစ်။ လူသိများသည် ဖိလစ်ပိုင်၏နောက်ဆုံးဂေဟစနစ်နယ်စပ်.
မြောက်ဘက်တွင်ကြည်လင်သောကြည်လင်သောရေ၊ သစ်ပင်ပန်းမန်များ၊ ၎င်းသည်နေရာဖြစ်သည် El Nido နှင့် Tayay တို့သည်ခရီးသွား dest ည့်သည်နှစ်ရပ်ဖြစ်သည် အရေးကြီးတယ် ၎င်းတို့ကိုရေနှင့်အထက်နှင့်အောက်ရှိထုံးကျောက်ချောက်ကမ်းပါးများနှင့်လှပသောရှုခင်းများဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာများရှိသည် ငါးနှင့်သန္တာနှင့်ပင်ပင်လယ်လိပ်.
သင်လေယာဉ်ဖြင့် Palawan ကိုရနိုင်သည် ပြီးတော့အဲဒီကိုရွှေ့ဖို့ခင်ဗျားဘတ်စ်ကားကိုသုံးတယ်။ သင်လာရောက်လည်ပတ်ခြင်းကိုရပ်တန့်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး Coron Reefsအမည်တူဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်၌ချောက်ကမ်းပါးများဝန်းရံထားသောရေကန်ခုနစ်ခု၊ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှသင်္ဘောများနှင့်လေယာဉ်အကြွင်းအကျန်များတွင်ရေကူးရန်နှင့်ရေငုပ်ရန်အလွန်ကောင်းသောနေရာဖြစ်သည်။
El Puerto Princesa မြေအောက်မြစ်အမျိုးသားဥယျာဉ် ၎င်းသည်အံ့သြဖွယ်ရာမြေအောက်ကမ္ဘာကိုပင်လယ်အတွင်းသို့ ၀ င်ရောက်လာပြီးဇီ ၀ မျိုးကွဲများကြွယ်ဝမှုကိုဖော်ထုတ်လိမ့်မည်။ ဤသည်ပန်းခြံနှင့်အခြားအဏ္ဏဝါပန်းခြံ, အ Tubbataha Reefကြေငြာခဲ့သည် ယူနက်စကိုကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်.
သငျသညျပြောင်းရွှေ့လိုလျှင်သင်ငါးဖမ်းရွာသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် စန်း Vicente Puerto Princesa နှင့်နီးစပ်သော သင်သည်လှေတစ်စင်းသို့ရောက်ရှိပြီး ၁၄ ကီလိုမီတာရှိသောသဲဖြူသောမုန့်ညက်ကဲ့သို့သောသဲသောင်ပြင်တွင်ပျော်မွေ့သည်။
၎င်းသည်ကျွန်းစု၏တောင်ဘက်ပိုင်း၊ ဗဟိုဗစ္စယေးယပ်စ်တွင်တည်ရှိသည်။ ၎င်းသည်လှပသောအဖြူရောင်ကမ်းခြေများရှိပြီးချောကလက်တောင်တန်းများအမည်ဖြင့်ဗတ္တိဇံခံထားသောအလွန်လှပသောရှုခင်းများကြောင့်ကျော်ကြားသည် - squareရိယာ ၅၀ စတုရန်းကီလိုမီတာတွင်ဖြန့်ဖြူးသော conical ထုံးကျောက်တောင်များများစွာရှိသည်။
၎င်းသည်အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်နေရာတစ်ခုဖြစ်သောစီဘူကျွန်းနှင့်အလွန်ဝေးကွာသောကြောင့်ကျဉ်းမြောင်း။ သွားရန်လွယ်ကူသည်။ ဗာဂျင်းကျွန်းသည်ပင်လယ်ကမ်းခြေနှစ်ခုစလုံးတွင်ရေချိုးထားသောလျှာဖြူနှင့်ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းနှစ်ခုလုံးတွင်တည်ရှိသော Lamanoc ကျွန်းသည်အလွန်ဆုတ်ယုတ်ယိုယွင်းပျက်စီးခဲ့ပြီးယနေ့ကျွန်း၏အသွင်အပြင်သည်ကျောက်တုံးနှင့် ပို၍ တူသည်၊ ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » အာရှခရီးသွားခြင်း » ဖိလစ်ပိုင် » ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရှိအကောင်းဆုံးကမ်းခြေများနှင့်ကျွန်းများ (အပိုင်း ၁)
တူနီးရှားနိုင်ငံရှိဗလီ ၃၀၀ ဗလီ၏ကိုင်ရူရန်မြို့
Andalusia (II) သို့အစာအိမ်လည်ပတ်မှု